Tondra-drano | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ny iray amin'ireo vokatra manimba indrindra amin'ny orana dia ny tondra-drano, satria esorin'izy ireo ny zavatra rehetra amin'ny lalany. Hazo, trano, arabe ary lava sns. Noho io antony io, ity tranga voajanahary ity dia iray amin'ireo atahoran'ny olona indrindra eo amin'ny fiarahamonina, satria ny rano nandalovany tamina hery mahery vaika.
Ao amin'ity habaka ity no hahitanao izay rehetra mifandraika amin'ny tondra-drano izay misy fiatraikany amin'ny mponina sy tanàna iray manontolo indraindray. Ny ora farany amin'ny resaka loza mitatao amin'ity fomba ity manerantany. Data, fahasimbana ary olona tsy hita hampahafantatra anao ny zava-drehetra izay misy fiatraikany amin'ny enclave manokana.
Inona ny tondra-drano?
ny Monica sanchez hace 3 taona .
Ny orana, amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, dia raisina an-tanan-droa, fa rehefa milatsaka amin'ny rano be ny rano na mandritra ...
Hampidi-doza olona an-tapitrisany ao anatin'ny 25 taona ny tondra-drano
Ny tondra-drano dia fisehoan-javatra toetr'andro izay tsy maintsy ataontsika. Araka ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary Science ...
Ahoana ny fomba famoronana tsunami ary inona no tsy maintsy ataontsika?
ny Portillo Alemanina hace 3 taona .
Imbetsaka isika no nandre tsunami. Ireo dia onjampeo mihetsiketsika nateraky ny andiana onja goavambe avy tany ...
Namela fahasimbana marobe sy fahafatesan'olona roa tany Murcia sy Alicante ny tafio-drivotra
ny Portillo Alemanina hace 4 taona .
Ny orana sy ny rivotra miantraika amin'ny atsimo atsinanan'ny Saikinosy Iberia sy ny Nosy Balearic ...
SARY SY VIDEO: Ny oram-baratra orana dia miteraka loza any Espana
ny Monica sanchez hace 4 taona .
Omaly dia andro iray tsy ho adinontsika mora foana. Miorina amin'ny 120l / m2 ny refesin'ny toetr'andro ka namela ny arabe maro manerana ny atsimo atsinanana ...
Fanamafisana mihabe mba hialana amin'ny vokatry ny tondra-drano
Andalusia dia tratry ny tondra-drano mahatsiravina noho ny oram-be nivatravatra tato ho ato. Noho izany…
Betsaka ny fahasimbana sy famindran-toerana noho ny oram-be
Raha jerena ny vinavinan'ny toetrandro natao tato ho ato dia faritany iraika ambin'ny folo Espaniola no nampandrenesin'ny matanjaka ...
Inona no atao hoe tondra-drano
ny Monica sanchez hace 6 taona .
Mety efa tany amin'ny faritra nisy tondra-drano ianao. Izay ipetrahako ny volana novambra 2013 dia nanana ...